Buy HOUSE RENT (ID-1163) (20Lks) in အင်းစိန် on ipivi.com
Land area - 1250 sqft, House area - 1012 sqft ,2and Half Stories for rent in Insein Township.
Monthly Rent Price - 20 Lks (Nego).
မြေအကျယ် - ၁၂၅၀ စတုရန်းပေ၊ အိမ်အကျယ် - ၁၀၁၂စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသော ငှားရန် နှစ်ထပ်ခွဲလုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်ငှားရမ်းခဈေးနှုန်းမှာ - သိန်း ၂၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: HOUSE RENT (ID-1163)